February 11, 2019 - Tamang Online
⊗मौरीले डसेपछि त्यसको खील हाम्रो शरीरमा गाडिन्छ र हामीलाई अति पीडा हुन्छ । अर्कोतिर, हामीलाई डस्ने मौरी पनि बाँच्दैन । अर्थात्, डसेपछि मौरी पनि मर्छ । त्यसरी, कसैलाई डसेपछि मौरी किन मरेको होला ? के त्यस्को ज्यान नै त्यसको खीलमा हुन्छ ? हाम्रो मनमा यस्तो जिज्ञासा उठ्नु स्वभाविकै हो । आउनुहोस् यहाँ मौरी र त्यसको डसाई तथा डसेपछि मौरी किन मर्छ ? भन्ने बारे सामान्य चर्चा गरौं । यस संसारमा सयौं किसिमका मौरीहरु पाइन्छन् । तर सबै मौरीले टोक्दैनन् । हामीले देखिरहेको भोगिरहेको टोक्ने मौरी भनेको मह बनाउने मौरी (Honey
क्यानाडामा सोनाम ल्होछार २८५५ सम्पन्न गर्दै तामाङ संस्था गठन
तामाङअनलाइन – क्यानाडाको टोरान्टोमा तामाङहरु भेला भएर सोनाम ल्होछार २८५५ फाग / ड्वा ल्हो सामुहिक रुपमा मनाएको छ | भेलामा उपस्थित मध्ये जेष्टता डेरिक मोक्तान तामाङले दिप प्रज्ज्वलन गरी ल्होछारको शुभकामान आदानप्रदान गरेका थिए | सोनाम ल्होछारको अवसरमा तामाङहरु बिच भेटघाट तथा परिचय गर्ने उद्धेश्यका साथ भेलाको आयोजन गरी सोनाम ल्होछार मनाएको हो | तामाङ समुदायको भाषा ,धर्म,भेषभुषा तथा कला संस्कृति र परम्परालाई निरन्तर दिदै तामाङ समुदायको पहिचान को लागि सम्पूर्ण तामाङहरु एकै थलोमा भेटघाट गर्ने माध्याम नभएकोले भेलाको आयोजन गरी ल्होछार मनाएको हो | भेलामा उपस्थित महानुभावहरु बिच छलफल
यो समाचार Flash News, Slideshow, तामाङ ह्युल, प्रमुख खबर, प्रवास संग सबंधीत छ |
६ लघुबित्तको १६ लाख ७८ हजार कित्ता आइपीओ पाइपलाइनमा
माइक्रोफाइनान्सको आइपीओ भन्नासाथ हुरुक्कै हुनेहरुका लागि सुखद खबर छ । ६ वटा माइक्रोफाइनान्सको आइपीओ बजारमा आउने भएको छ । ती कम्पनीहरुको १६ लाख ७८ हजार ३१८ कित्ता बराबरको आइपीओ बजारमा आउन लागेको हो । गणपति माइक्रोफाइनान्स गणपति माइक्रोफाइनान्स बित्तिय संस्था लिमिटेडले आइपीओ निष्काशन गर्दैछ । यो कम्पनीले ३ लाख ३५ हजार कित्ता आइपीओ जारी गर्न लागेको हो । यो कम्पनीको शेयर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी एनआइबीएल एस क्यापिटलले लिएको छ । कम्पनीले आइपीओ जारी गर्नका लागि गत पुस २ गते धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएको थियो । गुराँस लघुबित्त त्यस्तै आइपीओ जारी गर्न
ईन्जाको एशिया च्याप्टरको महासचिवमा दिपेन्द्र दोङ तामाङ चयन
काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली पत्रकार संघ (ईन्जा)को एशिया च्याप्टर गठन भएको छ । पत्रकार टंक पन्तको अध्यक्षतामा एशिया च्याप्टर गठन गरिएको हो । ईन्जाको विधानले अन्तर्राष्ट्रिय समितिको उपाध्यक्षले क्षेत्रीय समितिको नेतृत्व गर्ने व्यवस्था गरेको छ । नवगठित समितिको उपाध्यक्षमा नारायण न्यौपाने (नेपाल), आनन्द कोइराला (जापान), दीपक पुडासैनी (कतार) र मन्जु गुरुङ (कोरिया) रहनुभएको छ । समितिको महासचिवमा जनता टेलिभिजनका समाचार संयोजक दीपेन्द्र दोङ तामाङ, सचिवमा दिपु पोख्रेल (खेमकुमारी) र कोषाध्यक्षमा रामकुमार कामत चयन हुनुभएको छ । समितिको सदस्यहरुमा दीपक समिर, विकास थपलिया, अर्जुन सापकोटा, अनिल आचार्य रहनुभएको छ । यो
यो समाचार Flash News, आदीवासी जनजाती, ताजा समाचार, तामाङ ह्युल संग सबंधीत छ |